Etu esi melite anyị Kindle na aka | Ndị niile na-agụ akwụkwọ
Etu esi melite anyị Kindle na aka
Joaquin Garcia | | Amazon unu si n'ihe unu, ndị na-agụ akwụkwọ, software, Nkuzi nkuzi
Nke a bụ obere ndu maka ntuziaka Kindle ngwaọrụ mmelite. Ma Todo eReaders na anaghị m elekọta ihe nwere ike ime na ngwaọrụ gị. Tupu ịme ihe ọ bụla, gụọ nduzi ahụ dum wee nyochaa ya. N'izu a, Amazon wepụtara mmelite maka ngwaọrụ ya gụnyere ngwakọta nke Goodreads na eReader. Ntuziaka ahụ bara uru maka ngwaọrụ ọ bụla nke Kindle, dị ka ntinye akwụkwọ ntuziaka na eReaders na mbadamba nkume na-eme n'otu ụzọ ahụ. Tupu ịmalite na ntuziaka ahụ, gwa gị na emegoro m ntuziaka aka na ọkụ m na-enwu ọkụ ma nye m njehie. Agbalịrị m wụnye 11.3.1 nke bu ihe nwere mmekorita nke Goodreads. Ọ dabara nke ọma, echichi emebeghị ọ bụla isi mgbanwe m na ngwaọrụ na na tọgharịa O zuola ime ka ọ lọghachi na ọrụ, mana ọrụ m bụ ịkọrọ ya ka ị mara.
Kedu ihe anyị chọrọ maka mmelite ntuziaka
Ngwaọrụ ejiri si na batrị 100%.
Otu eriri USB iji gwa Kindle na pc.
Ndị ọkwọ ụgbọala ahụ arụnyere nke ọma maka PC iji mara Kindle.
Ihe mbụ bụ inwe Sienụ na 100% batrị, Ọ dịghị mkpa ihe Kindle bụ ma ọ bụrụ na anyị ga-ewe ogologo oge ma ọ bụ na ọ gaghị. Ọ bụrụ na enwere ike nrụgide, Kindle dị ka brik, yabụ ọ dị mkpa ịnweta batrị na 100%, maka nchekwa. Ozugbo anyị gosipụtara ihe a chọrọ, ọ dị mkpa na pc anyị na Kindle na-ekwukọrịta, ya bụ, mgbe anyị jikọtara Kindle, ọ ga-agụ pc dịka otu nchekwa nchekwa, na-egosi n'okpuru draịva siri ike n'ihe banyere Windows. N'ihi nke a, ọ dị mkpa ka ị wụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala Amazon. Ọ bụrụ na ịnweghị ha, ịnwere ike budata ha na njikọ a.
Ozugbo anyị nwere ihe ndị achọrọ n'elu, anyị ga-eme ya weebụ a na anyị na-ele ọhụrụ version nke Software. N'okwu nke Akwụkwọ dị arọ bụ 5.4.2 na Fire Kindu bụ 11.3.1. Ọ bụrụ na anyị nwere nsụgharị ndị a, anyị enweghị ike imelite dịka ha bụ nsụgharị ndị ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị nwere nsụgharị dị ala, nke kachasị mma, anyị nwere ike ịga n'ihu imelite Kindle.
Ma olee otu m ga esi mara ụdị nke Kindle m nwere?
Knowmara mbipute anyị nwere, anyị na-aga na anyị si na unu si menu «Ngwaọrụ»Site na Kindu ntọala menu ma chọọ nhọrọ«Ihe»N'ihe banyere Kindle Fire, achọtara ya na nhọrọ«ọzọ»Site n'elu ụlọ mmanya. Na-esote mbipute ahụ ị ga-ahụ bọtịnụ kwuru «Mmelite Kindle»Nke nwere nkwarụ, ya bụ, anyị pịa ihe anyị pịa anaghị eme ihe ọ bụla. Bọtịnụ a dị mkpa n'ihi na a ga-enyere ya aka ma emechaa.
Ozugbo anyị gosipụtara na anyị chọrọ mmelite ahụ, anyị na-aga weebụ a na anyị na-ebudata ngwugwu mmelite, anyị na-ebudata nke kwekọrọ na ihe nlereanya anyị. Ugbu a anyị nwere ngwugwu mmelite, anyị na-e copyomi ma mado ya na folda «Nchekwa n'ime»Site na anyị, anyị na-eme nke a site na PC, na-enwe Kindle jikọtara ya na eriri. Mgbe anyị mechara depụtaghachi ihe ngwungwu mmelite ahụ, anyị ga-ahapụ eriri ahụ ma ọ bụ naanị jikwaa ya. Ugbu a, anyị na-aga na ihuenyo ebe a gwara anyị banyere mbipute nke anyị etinyela ma anyị ga-ahụ na «Mmelite Kindle»A na-arụ ọrụ ugbu a ma na-arụ ọrụ zuru oke, ka anyị pịa ya na nwụnye ga-amalite.
N'ime oge a, ngwaọrụ nke Kindle ga-amalitegharịa ọtụtụ oge, echegbula onwe gị, ọ nwere ike ịnye gị njehie, dịka ọ mere m, ihe nrụpụta ahụ bụ ngwaọrụ ahụ n'onwe ya, mana ihe m mere bụ gbanyụọ Kindle wee laghachi iji gbanye ya, niile site na bọtịnụ gbanyụọ. Ọ bụrụ n’inwetaghị njehie, ekele, ị nweela nwelite ọhụụ ejikere ịga. Iji mechaa, gwa gị na mmelite akwụkwọ ntuziaka a na nchịkọta Amazon, yabụ ọ bụrụ na anyị nwere Kindle gbanyere mkpọrọgwụ, ọkachasị n'ihe gbasara Ọkụ Kindle, ngwaọrụ anyị ga-efunahụ mgbọrọgwụ ahụ mgbe mmelite ejiri aka. Ya mere chee echiche tupu ịme mmelite ma ọ bụrụ na i chere na ọ ga-adabara gị ma ọ bụ na ọ bụghị. Oh n'ụzọ, ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara nkuzi ma ọ bụ ọ bụ naanị emelitere, kwuo okwu na ya n'isiokwu ahụ, ọ na-enyere aka.
Ozi ndị ọzọ - Ezi ihe oriri na-esonyere ezinụlọ Kindle, Xda-Mmepe,
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị niile na-agụ akwụkwọ » ụlọ ọrụ » Amazon unu si n'ihe unu » Etu esi melite anyị Kindle na aka
Ledị mpempe akwụkwọ ọkụ nke ọgbọ mbụ anaghị etinye ezigbo akwụkwọ, emelitere m otu izu gara aga ma ọ nweghị ihe ọ bụla na-egosi m. Ntughari ohuru nke mbu nke KP bu 1 🙁
Nkem bu otu ihe ohuru na akarachi goodreads apụtaghi, ọrụ a ọ ga-abụ maka nsụgharị ndị America?
Enwere m mbipute America na nwelite ikpeazụ nke tụbara m bụ 5.3.9
Agbabeghị m imelite mana agụrụ m na Goodreads na-arụ ọrụ naanị na United States.
Ndewo onye obula. Njikọ dị n'isiokwu ahụ bụ nsụgharị ndị America, mana ọ baghị uru, sistemụ ahụ bụ nke ekwentị mkpanaaka, etinyere faịlụ ahụ wee gwa ngwaọrụ ka ọ kwụnye ya. Ihe adịghị mkpa bụ mbipụta nke nsụgharị ahụ, ị ​​ga-ahụ na ngwaọrụ gị dị ala karịa nke Amazon na-etinye na weebụsaịtị ya. Ugbu a ekwuputala mmelite maka Ọkụ Na-ahụ Maka Ọhụrụ, maka Akwụkwọ nke Akwụkwọ nke 2013 na Ọgbọ nke abụọ Ọkụ ọkụ, ọ bụ ezie na m nwalere ya na mmelite ahụ na-enye njehie. N'ime ndị ọzọ, ekwenyesiri m ike na mmelite ahụ ga - apụta mana amaghị m mgbe, ikekwe ọ dịlarị ebe ahụ ma ọ bụ ruo mgbe mbido ngwaọrụ ọzọ, ọ bụghị nke a, naanị Amazon maara. Ndo maka enweghị ike ịkọwapụta nke ọma, m ga-achọ. Oh na ekele maka ịgụ na ịgbaso anyị.
Zaghachi Joaquín García
Na American version, gịnị ka ị na-ekwu ma ọ bụrụ na goodreads na-agba ọsọ?
N'oge na-adịbeghị anya, azụtara m ọgbọ nke abụọ Kindel, bụ nke akara ngosi nke obere bọlbụ na-apụ n'anya, nke a na-eji mee ka ìhè ngebichi na iji dozie ọkụ ọkụ. Emeela m ihe niile m nwere ike n’enwetaghị akara ngosi ahụ, melite, reboot, tọgharịa; n’ime nke ọ bụla ruo ugboro isii. N’etinyeghị uru a agụghị onye na - agụ ya, ọ ga - emebi anya ya ma abaghị uru n’abalị. Nwere onye ọ bụla n'ime unu, ndị na - akọ akụkọ, nwere ike inyere m aka ???? Daalụ
Akwụkwọ ọhụrụ m ọhụrụ (2015) gosipụtara Ezi Ọgụ. Ọ bụghị na ndị ọzọ.
Ọrụ. Dịka ị na-akọwa na ntuziaka ahụ, emelitere mmelite ahụ n'ụzọ dị mfe, daalụ. "Ihe ederede Akwụkwọ (6th Generation) wetara na mbipute 5.6.5"
It maraworị ma ọ bụrụ na enwere ike tinye akwụkwọ nyocha ọma na nke mbụ ọgbọ Kindle paperwhite (2012) zụtara na Spain? Agbalịrị m imelite ngwanrọ m nke Kindu dịka ị na-ekwu na ọ naghị arụ ọrụ. Daalụ!
Zaghachi Ane Ayo
gerardo abụọ dijo
Amazon zitere m ozi na-egosi mmelite akpaka nke ụdị ahụ, amaghị m ihe mere, enwere m ụbọchị abụọ ejikọtara na pc na ọ na-apụta na ụdị "biko chere obere oge mgbe ọkụ gị malitere" na ihe karịrị abụọ ụbọchị agafeela Ihe m nwere ike ịme?
Zaghachi gerardo durand
Kedụ ka m ga - esi mee nke m na m nwere nsụgharị 2.5.3?
Ndewo, enwere m ụdị 2.5.8 na serial nke bidoro na b009… M detuo mmelite melite .bin, a na m eme usoro niile, mana ọ nweghị ike ịme nhọrọ nke «melite ọkụ gị».
N'ezie, mgbe m jikọtara ya na usb, m na-ahụ ụdị ahụ ehichapụ faịlụ .bin
Nkwado ọ bụla na nke a?
Mbadamba ụrọ Tagus maka ihe na-erughị € 80, mbadamba ihe na-adọrọ mmasị ịgụ
Woxter Scriba 190 Pearl, onye na-agụ akwụkwọ ngwa ngwa na ahịa